‘डा. केसी भोकै बस्न हुने, हामी किन नबस्ने ?’ – Health Post Nepal
२०७५ माघ १० गते १८:२९
सरकारले डा. गोविन्द केसीसित सहमति गर्ने र आफैँ सहमति तोड्ने वा कार्यान्वयन नगर्नेक्रम बाम्बार दोहोर्याउँदा डा. केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम देखिएको भन्दै नागरिकसमाजले जीवनरक्षाका लागि सरकारसित अपिल गरेको छ ।
पूर्वसहमति कार्यान्वयनको मागसहित १६औँ सत्याग्रहमा रहेका डा. केसीको अनशन १६औँ दिनमा पुगिसक्दा उनको जीवन जोखिममा परेको अवस्थाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै नागरिक अगुवाहरूले जीवनरक्षाका हस्ताक्षरसहित सामूहिक आह्वान गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितका नागरिक अगुवाहरूले १५औँ सत्याग्रहका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पहल र रोहबरमा डा. केसीसित भएको सम्झौताको इमानदारीका साथ कार्यान्वयन गर्न अपिल गरेका छन् । डिल्लीबजार भोजनगृहमा बिहीबार भेला भएका नागरिक अगुवाहरूले सम्झौताको इमानदार कार्यान्वयनमार्फ डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि सामूहिक हस्ताक्षरसहित आह्वान गरेका हुन् ।
यसअघि पनि नागरिक अगुवाहरूले डा. केसीसितको सम्झौताबाट सरकार पछि हटेमा राज्यकै विश्वसनीयता गुम्ने भन्दै सरकारलाई संवेदनशील हुन अपिल गरेका थिए ।
‘मेरा कक्षाका विद्यार्थी हुन्थे भने सञ्चारमन्त्रीको कान समात्थेँ’
नागरिक अगुवा दुर्गा सुवेदीले डा. केसी भोक हड्तालमा बसिरहँदा उहाँको समर्थनमा भोक हड्तालमा उत्रिन सबैसँग आग्रह गरे ।
हस्ताक्षर संकलन गरिनुअघि आयोजित छलफलमा बोल्दै सुवेदीले कामविनाको ऐक्यबद्धताले अर्थ नराख्ने भन्दै रिले अनशनका लागि आह्वान गरे । ‘म मृत्युप्रति निर्भय छु,’ उनले भने, ‘कम्तीमा एकदिन भोकै बसेर सरकारलाई दबाब दिअाैँ ।’
सुवेदी सत्यका लागि भोकै बसेर मर्न परे पनि त्यो खुसीकै विषय हुने समेत बताए । कार्यक्रमका अधिकांश वक्ताले सुवेदीको प्रस्तावमा समर्थन जनाएका थिए । सुवेदीले नागरिक तहबाट पनि धर्ना र भोक हड्तालका कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताए ।
मानवअधिकारवादी कृष्ण पहाडीले शान्तिसमाजले डा. केसीसँगको विगतको सम्झौता कार्यान्वयन र भ्रष्ट्रचारविरुद्ध देशभर आन्दोलन छेडिसकेको भन्दै सत्याग्रहलाई निस्तेज गर्ने सरकारले षड्यन्त्र गरिरहेको बताए । ‘गल्ती गरेको मान्छे विचलित हुन्छ, सरकार पनि विचलित छ,’ उनले भने ।
प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठले अहिलेको सरकारको रवैयाले बुद्धिजीविहरु लज्जित, दुःखित र आक्रोशित भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले दोहोराे चरित्र देखाएको आरोप लगाए । ‘लोकतन्त्रमा विश्वासघात गरेर जग हसाइरहेका छन्,’ श्रेष्ठले भने ।
अहिले सरकार सत्य कुरा छोप्न र झुटोलाई फैलाउने गोयवल्स शैलीमा लागेको भन्दै सञ्चारमन्त्रीको शैलीप्रतिसमेत आपत्ति जनाए । ‘झन् सञ्चारमन्त्रीको तरिका, मेरो कक्षाका विद्यार्थी हुन्थे भने कान समात्थेँ ।’
नेपाल बार एसाेसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेलले डा. केसीजस्तो मान्छे गुमाउनुपर्ने अवस्था आउने होकि भन्ने त्रास भइरहेको बताए । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारले डा. केसीलाई गम्भीर धोका दिएको भन्दै संसदीय सर्वोच्चताको नाममा मनपरी गर्न नमिल्ने बताए । ‘संसद् भनेको जनताको वारेसनामाप्राप्त संस्था हो, दुईतिहाइ छ भन्दैमा केपी ओलीलाई श्री ५ घोषणा गर्न नसक्ने’ बताए ।
पत्रकार युवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीले मैले हस्ताक्षर गरेको त हो तर कार्यान्वयन गर्न बाध्य छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको भन्दै सहमति पूरा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पु-याउनुपर्नेमा जाेड दिए ।
रेविजबाट कसरी बच्ने?
नेपालमा अनुवांशिक अध्ययन गर्दा डेल्टा भाइरस
माओवादी नेता पुन उपचारका लागि बैंकक जाँदै, के भएको हो?
विराट मेडिकल कलेजमा मुटुरोगीका लागि स्पेशल कार्डियो प्याकेज
कोरोनाका कारण बन्द रहेका सर्लाहीका आठवटै सीमानाका खुला
दक्षिण कोरियामा कोरोनाले पुनः महामारीको रुप लियो